Disc Granulation Production Line - YiZheng Arọ Machinery Co., Ltd.
Usoro nhazi usoro ihe eji arụ ọrụ zuru ezu na iche iche bụ otu uru dị mkpa nke ụlọ ọrụ Henan Zheng Heavy. Anyị nwere ahụmịhe na atụmatụ na ọrụ nke ahịrị mmepụta fatịlaịza dị iche iche. Ọ bụghị naanị na anyị na-elekwasị anya na usoro njikọ ọ bụla na usoro mmepụta, mana anyị na-aghọtakwa nkọwa nke usoro ọ bụla na usoro mmepụta niile wee rụpụta nke ọma. Anyị na-enye zuru ezu na a pụrụ ịdabere na mmepụta akara ngwọta dị ka mkpa n'ezie nke ndị ahịa.
A na-ejikarị emepụta eriri granulator emepụta fatịlaịza. N'ikwu okwu n'ozuzu, fatịlaịza ngwongwo nwere ma ọ dịkarịa ala abụọ ma ọ bụ atọ nri (nitrogen, site, potassium). Ọ nwere njirimara nke ọdịnaya dị elu na obere mmetụta. Fatịlaịza mejupụtara na-arụ ọrụ dị mkpa na njikọta spam. Ọ nwere ike ọ bụghị naanị melite Fertilization arụmọrụ, kamakwa kwalite anụ na akwa mkpụrụ nke kụrụ. Usoro mmepụta nke diski granulator bụ ezigbo ihe ngwọta iji nweta ogo dị elu ma mepụta nke fatịlaịza njikọ. Usoro mmepụta nwere ike ịmepụta fatịlaịza NPK, fatịlaịza DAP na ngwongwo fatịlaịza ndị ọzọ.
Ngwaọrụ dị maka mepụta fatịlaịza
Akụrụngwa maka imepụta fatịlaịza dị iche iche bụ urea, ammonium chloride, ammonium sulfate, ammonia mmiri mmiri, ammonium monophosphate, diammonium phosphate, potassium chloride, potassium sulfate, tinyere ụfọdụ ụrọ ndị ọzọ.
1) Mmiri nitrogen: ammonium chloride, ammonium sulfate, ammonium thio, urea, calcium nitrate, wdg.
2) Fatịlaịza potassium: potassium sulfate, ahịhịa na ntụ, wdg.
3) Fatịlaịza fatịlaịza: calcium perphosphate, arọ calcium perphosphate, calcium magnesium na phosphate fatịlaịza, phosphate ore ntụ ntụ, wdg
Mmepụta akara nke diski granulator dị elu, rụọ ọrụ nke ọma ma baa uru, akụrụngwa akụrụngwa bụ kọmpat, akụrụngwa dị elu, ọrụ ahụ dị mfe, ọ dịkwa mfe maka mmepụta nke fatịlaịza.
1. A na-eji ngwongwo niile na-eguzogide ọgwụ na-eyi akwa.
2. Enwere ike ịgbanwe ikike mmepụta dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
3. Onweghi ahihia aturu ato, nchekwa ike na nchekwa gburugburu. Ọ na-agba ọsọ nwayọọ nwayọọ ma dị mfe ilekọta.
4. The onyinye fatịlaịza mmepụta akara nwere ike ọ bụghị naanị na-emepụta elu, ọkara na ala ịta onyinye fatịlaịza, kamakwa na-emepụta fatịlaịza organic, inorganic fatịlaịza, ndu fatịlaịza, magnetik fatịlaịza, wdg The granulation ọnụego dị elu.
5. The layout nke dum mmepụta akara bụ kọmpat, na nkà mmụta sayensị na ezi uche, na technology na-elu.
Ngwa mmepụta ahịrị nke diski granulator gụnyere ụlọ nkwakọba ihe er igwekota (agwakọta) gran disk granulator (granulator) sie igwe sive igwe (na-agbasa n'etiti ngwaahịa ndị na-adịghị mma na ngwaahịa ndị emechara) eriri ebu (njikọ nke usoro dị iche iche) na akụrụngwa ndị ọzọ. Rịba ama: usoro mmepụta a bụ maka ntụnye naanị.
Usoro usoro nke disk granulator mmepụta akara nwere ike ịkekọrịta n'ime:
1. Raw ihe onwunwe Efrata usoro
Nke mbu, kesaa ngwa oru karie oke. Akụrụngwa gụnyere urea, ammonium nitrate, ammonium chloride, ammonium sulfate, ammonium phosphate (ammonium phosphate, diammonium phosphate, calcium monophosphate, calcium carbonate), potassium chloride, potassium sulfate, wdg.
2. Raw ihe inggwakọta usoro
A na-agwakọta ihe niile na-eme ka ọ dị mma na blender.
3. Broken usoro
The vetikal yinye crusher azọpịa nnukwu iberibe ihe n'ime obere iberibe nke nwere ike izute granulation chọrọ. Mgbe ahụ eriri ebu ebu-eziga ihe n'ime disk granulation igwe.
4. Granulation usoro
Mpempe diski nke diski granulation na-agbaso usoro arc, bọọlụ na-akpụ bọl nwere ike iru karịa 93%. Mgbe ihe a na-abanye na efere granulation, site na ntụgharị na-aga n'ihu nke diski granulation na ngwaọrụ ịgba, ihe a na-ejikọta ọnụ iji mepụta ahụ nwere ụdị edo mara mma. Disk granulator bụ ihe dị mkpa maka igwe na - emepụta fatịlaịza.
5. Usoro nyocha
A na-ebuga ihe ndị a na-eme ka ihe dị mma na igwe na-acha uhie uhie maka nyocha. Ruru eru ngwaahịa nwere ike tinye okokụre ụlọ nkwakọba ihe site a eriri ebu, na nwekwara ike ozugbo packaged. Eriri erughị eru ga-alaghachi regrainate.
6. Usoro nkwakọ ngwaahịa
Nkwakọ ngwaahịa bụ usoro ikpeazụ nke usoro mmepụta fatịlaịza. Emechara ngwaahịa a ejiri igwe akụrụngwa zuru ezu. Ọdịmma dị elu nke akpaaka na arụmọrụ dị elu ọ bụghị nanị na ọ na-enweta nha ziri ezi, kamakwa jupụta usoro ikpeazụ. Ndị ọrụ nwere ike ijikwa ọsọ ọsọ ma tọọ ntọala ọsọ dịka ihe achọrọ n'ezie.